General - Ngwa Ngwa | Akụrụngwa Akụkọ (Peeji 16)
Facebook na nkenke
Ọ nweghị onye ga-agọnahụ na Facebook bụ onye isi nke netwọkụ mmekọrịta na gburugburu ụwa. Dị otú ahụ ...
Ajụjụ ọnụ Nick O'Neill si na AllFacebook
AllFacebook bu blog kacha mara amara banyere Facebook. Edere n'asụsụ Bekee site Nick O'Neill,…
Ihe kpatara ụlọ ọrụ kwesịrị iji tinye ego na Facebook
Emechara m gụọ otu isiokwu gbasara etu esi arụ ọrụ - gaa okwu - atụmatụ na mgbasa ozi mmekọrịta, na ...
Kpachara anya ihe ndị na-eto eto na-eme na Facebook
Kovi Dunbar, onye na-eto eto nke furu efu 10 ụbọchị gara aga n'aka nwoke ọ zutere na Facebook, ugbua ...
Mgbasa ozi Facebook: Alternative Advertising Online, Nkebi II
N'akụkụ mbụ nke nnyefe nke Mgbasa ozi Facebook, anyị tụlere otu esi emepụta mkpọsa mgbasa ozi na Facebook….
Gmail. Otu esi emepụta akaụntụ Gmail na-enweghị oku
Otu esi emepụta Gmail. Gmail na-enye gị email n'efu na-enweghị mkpa oku. N'ime akwụkwọ ntuziaka a, ị ga-ahụ otu esi emepụta akaụntụ, ihe ịchọrọ, ihe ọ na-enye, wdg. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere email Gmail, gaa n'ihu na-agụ.
Windows Live Hotmail na Spanish. Kedụ ka m ga-esi gbanwee asụsụ nke email m Hotmail?
Hotmail na-abịa na ndabara na Bekee, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta otu esi etinye ya na Spanish, egbula oge ịgụ akwụkwọ ntuziaka a banyere otu esi agbanwe asụsụ nke Windows Live Hotmail na Spanish ...
AIMP Omuma. Ntuziaka ntinye na nhazi mbu
AIMP Classic bụ egwuregwu kachasị mma m nwara. Muta otu esi etinye ma hazie AIMP Classic site na iji ntuzi aka Vinagre Asesino.
Kwụsị YouTube. Esi kwụsị vidiyo na-egwu na YouTube
Debe bọtịnụ nkwụsị n'akụkụ vidiyo YouTube gị ịkwụsị ịkwụsị ha. Greasemonkey na-enye gị ohere ịme ya n'ụzọ dị mfe ...
Ugwu South Park. Otu esi emepụta avatar nke South Park
Mepụta ebe a na South Park avatar n'efu na-enweghị ịwụnye ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe nwa bebi gị site na usoro South Park, gaa n'ihu na-agụ akwụkwọ ntuziaka a ...
Prometeus (na Spanish). Googlebọchị Google ga-achịkwa anyị niile
Onye nkwusa: Google ọ ga-achịkwa anyị? Na vidiyo a na-adọrọ mmasị ị nwere ike ịhụ amụma nke otu ọdịnihu ga - esi Google ga - achịkwa ihe niile site na mmemme ya. Echefula ya. Nweta
Ihe nkiri Simpsons. Etu ị ga - esi mepụta avatar Simpsons gị
Mepụta ihe omuma nke Simpsons. N'ime nkuzi vidio a, ị ga - ahụ otu esi emepụta avatar ahaziri nke Simpsons site na usoro nke usoro.
Etu esi wunye Windows Live Messenger
Ọhụrụ Windows Live Messenger na-arụ ọrụ dị mfe ma jiri ntuziaka a ị ga-enwe ya ọbụlagodi. Muta otu esi etinye ma banye na ozi
Ka anyi kpoo alaplaya. N'akụkụ osimiri?. Mba alaplaya
alaplaya na-enye gị egwuregwu egwuregwu atọ na-enweghị egwuregwu na Spanish. Nwee ọtụtụ ndị egwuregwu site na ihu.
Ebee ka eMule ga-esi nweta ego?
Chọrọ ịma ebe eMule na-echekwa ego gị ka ị ghara idafu ha mgbe emechara? Nọgidenụ na-agụ M na-akọwa ihe niile nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Akwụkwọ Ntuziaka Sqirlz Morph. Esi moph ihu gị
Mụọ otu esi eji Sqirlz Morph gbanwee n'etiti ihu. Jiri nkuzi vidio a, nke gunyere ntuziaka nzọụkwụ site na ntinye n'efu na-ekele Sqirlz Morph.
Mmemme obibi. Ihe ha bụ, ihe ha bụ maka otu esi gbanyụọ mmemme obibi ebe nchekwa.
Mmemme bi na ebe nchekwa bụ ngọzi na isi ọwụwa. Mụọ ihe niile gbasara mmemme ndị bi na usoro ntuziaka a ...
Mara ihe niile banyere ozi
Ozi. Ihe niile gbasara nnọchi maka MSN Messenger, ihe ọhụrụ Windows Live Messenger. Mụọ otu esi etinye, hazie ma jiri ya na nkuzi ndị a maka ụdị ọhụụ nke ozi.
Otu esi ejikọ edemede gị na ibe akụkọ dịka Meneame, Enchilame, Fresqui, Technorati, wdg.
Ọ bụrụ na ịmaghị otu esi ejikọ isiokwu gị na ibe akwụkwọ akụkọ, gụọ akwụkwọ ntuziaka a nke ị ga - amụta etu esi ejikọ blog gị na Meneame, Fresqui, wdg. ...
Ekekọrịta Kacha Howzọ esi kesaa ọtụtụ faịlụ na oke njedebe enweghị oke.
Hot Share bụ ọhụrụ free multimedia nchekwa na-enweghị download ókè. Bugote dị ka ị chọrọ na-ekpo ọkụ òkè!. Mụọ otu esi eji akwụkwọ ntuziaka a.
Ihe ntụgharị ntanetị. Olee otu iji tọghata site na otu usoro ọzọ na-enweghị wụnye ọ bụla omume
Jiri ndị ntụgharị ntanetị iji tọghata faịlụ site na otu usoro gaa na nke ọzọ na-enweghị wụnye ụdị mmemme ọ bụla na kọmputa gị. Ndị a bụ ndị kacha mma ...
Ihe ngosi Google. Etu ị ga-esi mata ihe masịrị gị
Alerts Google na-enye gị ohere ịnwe ihe ọ bụla gbasara isiokwu ọ bụla masịrị gị, gụọ nkuzi m mere, iji mụta otu esi eji akara ngosi Google mepụta ihe ngosi gị.
Otu esi emezi uzo ndekọ na Nero 7. Improkwalite ihe ndekọ anyị
Na Nero 6 ọ dị mfe ịhụ ọsọ ndekọ, ọhụụ ọhụrụ Nero 7 nwere ya zoro ezo, mana ọ bụghị nke ukwuu, gụọ obere obere okwu a na Vinagre Asesino blog na ị ga - ama otu esi agbanwe ọsọ nke ndekọ gị
Faịlụ THM na igwefoto dijitalụ (foto ma ọ bụ vidiyo)
THM: Ọ bụrụ na ị na-ebufe faịlụ site na igwefoto gị na kọmputa gị ma ị gafee ndọtị a, gụọ post a iji chọpụta ihe faịlụ ndị a nwere mgbatị "HTM" bụ maka.
Ebee ka eMule ga-esi nweta ego? (Nkebi nke abụọ)
Akụkụ nke abụọ nke mini ndu na eMule Ebe e si nweta. Ebee ka ha nọ, otu esi enweta ha, kedu ihe akwụmụgwọ bụ maka ...
Etu esi lelee vidiyo Youtube
Enweghị ike ịlele vidiyo YouTube? N'ebe a, anyị na-akọwa nzọụkwụ site na otu esi edozi nsogbu a na vidiyo YouTube.
Olee otú ọkụ a nkiri na DVD Ada Ada
Ebe ị ga-amụta otú ọkụ a nkiri na DVD Ada Ada nzọụkwụ site nzọụkwụ na mfe na a omume na bụ kpam kpam free.
Esi gbaa Nero ọkụ otu diski data
Ebe ị ga-amụta nzọụkwụ site nzọụkwụ otu esi esure data DVD na Nero ma ị ga-ahụ ọtụtụ nkuzi ndị ọzọ.
Esi gbaa DVD oyi akwa okpukpu abụọ na DVD mgbe niile
Ebe ị ga-amụta otú ọkụ a abụọ oyi akwa DVD a nkịtị DVD (otu oyi akwa)